Wasiir Goodax oo sharaxay sababta ay ardayda Muqdisho ugu bateen dhicitaanka imtixaanka – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia - Idman news
Wasiir Goodax oo sharaxay sababta ay ardayda Muqdisho ugu bateen dhicitaanka imtixaanka – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Muqdisho-KNN-Maalin ka dib markii Wasaaradda Waxbarashada ee dowladda Federaalka ay ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga sare, waxaa si weyn looga hadlay kumannaan arday oo wasaaradu ay sheegtay inay ku dhaceen imtixaankaasi gaar ahaan ardey badan oo ku sugan caasimadda Muqdisho.
“In imtixaanka ay ardayda ka dhacaan waa in ay aysan ku guuleysanin. Sida loo saxo imtixaanka halkii maado ee qofkiiba waxaa saxa saddex qof, ka dibna waxaa uga sii dambeeya, qofka kale oo eegaya sidii wax loo saxay ka dibna kormeeraya, waxaana sidoo kale jira dad kale oo isku daraya dhibcaha ardayga uu helo iyo hubintooda, waxaana isleenahay sidii ugu quruxda badneyd ayaa loo saxay”, ayuu yiri Cabdullaahi Goodax Barre.
Wasiir Goodax oo sii hadlaayey ayaa yiri, “Wax qarsoon ma ahan sida imtixaanka loo saxo oo walibana sannadkan waxaan ku casuumnay kuwa ay iska soo xuleen, kuwaas oo marqaati ka ahaa sida loo saxato imtixaanka.”
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo hadal ka jeediyey xaflad uu Jaamacad uga qalin jebinayey ayaa yiri, “Waxaad ogtihiin imtixaankii shalay natiijadiisa la shaaciyey ee dugsiga sare lambarka arday ee ka dhacday.Waxaa lagu mashquulay Tiktok iyo Taabuu, marka qof kasta oo waxaas tacliintiisa uga mashquulay natiijadaas ayuu dhaxlayaa, qof kasta oo habeeno u soo jeeda dhisitaanka nafsadiisana mustaqbal ayuu dhisayaa, qofkii doonaya in uu meel gaarana runtii habeenuu dhafraa.”
Halkan ka dhageyso codka Wasiir Goodax
Previous Xukuumadda xil-gaarsiinta oo ansixisay 9-xubnood oo ku biiraya guddiga la-dagaallanka musuqa – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Sawirro-muuqaal: Madaxweyne Axmed Madoobe oo khudbad ka jeediyay kulanka soo dhoweyn ah oo loo sameeyay Madaxweynayaasha Dowladdaha Puntland iyo Jubaland